ओमिक्रोन १० दिनभित्रै ३५ देशसम्म पुग्यो, यसबाट बच्न के गर्ने ? जान्नुहोस्। – List Khabar
Home / समाचार / ओमिक्रोन १० दिनभित्रै ३५ देशसम्म पुग्यो, यसबाट बच्न के गर्ने ? जान्नुहोस्।
admin December 6, 2021 समाचार Leaveacomment 568 Views
क्षिण अफ्रिकामा को`रोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भेटिएपछि कर्नाटकमा पनि बिहिबार यसका दुईजना संक्र`मित भेटिएका छन् । हालसम्म नेपालमा भने यसबारे केही जानकारी छैन ।
Previous के कारणले हुन्छ हिस्टेरिया ?
Next बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार